သင့်အသားအရေကို တောက်ပစေသည့် အစားအသောက်များ - Hello Sayarwon
Dr. Ye Mhan Linn မှ ရေးသားသည်။ 16/09/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အရေပြားသည် လူ၏ခန္ဓါကိုယ်အတွက် အရေကြီးသော အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အရေပြား ကျန်းမာ ရေးသည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ ထို့ကြောင့် တောက်ပ ရွန်းလဲ့သော အရေပြားအတွက် စာသုံးသင့်သော အစားအသောက်များကို တင်ပြပါမည်။
ခရမ်းချဉ်သီးတွင် လိုင်ကိုပင် (lycopene) များစွာ ပါရှိသောကြောင့် နေရောင်ခြည်ကြောင့် အသားအ ရည် ပျက်စီးခြင်းကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပါသည်။ သင်သာ ခရမ်းချဉ်သီး ကြိုက်နှစ်သက်သူ တစ်ဦးသာ ဖြစ်ပါလျင် ချောမွတ်သော အသားအရည်ပိုင်ရှင် ဖြစ်ရုံသာမကဘဲ ရှိရင်းစွဲ အသက်ထက်ပင် နုပျိုစေနိုင်ပါသည်။ လိုင်ကိုပင်သည် ခရမ်း ချဉ်သီးကို အနည်းငယ် ချက်ပြုတ်မှသာ ထွက်ပေါ်လာ ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လိုင်ကိုပင် ထွက်ရှိလာရန် ခရမ်းချဉ်သီး အစိမ်းမစားဘဲ စွတ်ပြုတ်ထဲစိမ်ခြင်း၊ မီးဖုတ်ခြင်း၊ ကင်ခြင်း စသည်ဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပို၍ စားချင်စဖွယ် ဖြစ်စေပါမည်။
ရွန်းလဲ့တောက်ပသော အသားအရည်အတွက် ဘယ်ရီသီးများ စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် လိုအပ်သော ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင် ပစ္စည်း များကို ရရှိစေပါသည်။ အရောင်ပိုရင့်သော ဘယ်ရီသီးများ သည် ပို၍အကျိုးရှိပါသည်။ ပြင်းထန်သော ဝက်ခြံထွက်ခြင်း များတွင်ပင် ဘယ်ရီသီးတွင် ပါဝင်သော ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင် ပစ္စည်းများကြောင့် သက်သာစေနိုင်ပါသည်။ သွေးအတွင်းရှိ ဓါတ်တိုးပစ္စည်းများကို လျော့ချနိုင်လျင် ပို၍တောက်ပသော အသားအရည်ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဓါတုပစ္စည်းများ လိမ်းခြယ် ပြီး နေပူထဲထွက်ခြင်းနှင့် စိတ်ဖိစီးမှု့များသည် ဓါတ်တိုး ပစ္စည်းများကို ထွက်စေသောကြောင့် ဝက်ခြံထွက်ခြင်းနှင့် ရင့်ရော်ခြင်းကို ပိုမိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ လတ်ဆတ်သော ဘယ်ရီသီးများရှိ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင် ပစ္စည်းများသည် မျက်နှာ ရှိ ကော်လဂျင်များ ပျက်စီးမှု့ကိုလည်း ဟန့်တားပေးပါသည်။ ပို၍ တောက်ပသော အသားအရေအတွက် ဘယ်ရီသီးများ စားကြပါစို့။
လေ့လာတွေ့ရှိမှု့များ အရ ငါးနှင့် ပင်လယ်စာများ စားသုံးသူ များတွင် အသားအရေ တွန့်ခြင်း ပို၍နည်းပါးကြောင်း တွေ့ရှိ ရပါသည်။ အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ ယင်းအစားအစာများ တွင် ပါဝင်သော omega-3 သည် အသားအရေတွန့် ခြင်းကို ဟန့်တားပြီး အိုမင်းခြင်းကို နှေးကွေးစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ငါးနှင့်ပင်လယ်စာများ စားသုံးခြင်းဖြင့် သင့်ကိုပို၍ ကျန်းမာစေသလို ပို၍လည်းနုပျိုစေပါသည်။
Ceramidesများသည် အလှကုန် လောကတွင် နာမည်ကြီးလာသော အရေပြားဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ ဖြစ်ပါသည်။ အသက်ကြီးခြင်းကို ဟန့်တားခြင်း၊ အရေးအ ကြောင်းကို သက်သာစေခြင်းတို့ အတွက် ထုတ်လုပ်သော ထုတ်ကုန် အသစ်များအတွက် မပါမဖြစ်ပင် ဖြစ်လာပါသည်။ ယင်း Ceramides များ ပေါများစွာ ပါသော အရာမှာ ဆန်လုံးညို ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Ceramides ကို သဘဝအတိုင်း ရရှိစေသောနည်း မှာ ဆန်လုံးညို စားခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဆန်လုံးညိုစားခြင်း ဖြင့် သင့်အရေပြားကို သဘာဝအတိုင်း ရေဓါတ်ပြန်လည် ဖြည့်တင်းနိုင်ပြီး သင့်အသားအရေကို တောက်ပစေပါလိမ့် မည်။
သင့်မီးဖိုချောင်မှ အလွယ်တကူ ရရှိနိုင် အစားအစာများ၏ တန်ဖိုးကို လျော့မတွက်ဘဲ သင့်အသားအရည် အတွက် လွယ် ကူစွာ အသုံးပြုလိုက်ပါ။ အထက်ပါ အစားအသောက်များကို နေ့စဉ်ထည့်သွင်း စားသောက်ခြင်းဖြင့် ရွန်းလဲ့တောက်ပသော အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်လိုက်ပါ။
5 Foods to Eat for Healthy, Glowing Skin. http://www.besthealthmag.ca/best-looks/skin/5-foods-to-eat-for-healthy-glowing-skin/2/. Accessed August 8, 2016.
The Pretty Skin Diet. http://www.prevention.com/beauty/natural-beauty/the-perfect-diet-for-pretty-skin/slide/11. Accessed August 8, 2016.
Foods To Make Your Skin Glow. http://www.forbes.com/sites/jennagoudreau/2011/07/28/foods-to-make-your-skin-glow/#697e386f60ca. Accessed August 8, 2016.
Miracle Foods For Glowing Skin.http://www.nutritionsecrets.com/miracle-foods-for-glowing-skin/. Accessed August 8, 2016.
These 8 Foods Will Completely Change Your Skin and Make it Glow. http://www.onegreenplanet.org/natural-health/foods-that-will-completely-change-your-skin-and-make-it-glow/. Accessed August 8, 2016.